8 Inqanaba 12V 20A Automatic Lithium LiFePO4 Battery setshaja mveliso kunye nabathengisi | Ligao
MBC 7-Isigaba Battery Charger
MEC 8-Isigaba Battery Charger
'S MFC 8-Isigaba Battery Charger
LBC 8-nqanaba Lithium & LiFePO4 Charger
Inverter Nge Battery Charger
Automatic Voltage kungako
Wall Type Onyuswe
8 Inqanaba 12V 20A Automatic Lithium LiFePO4 Battery Ch ...
8 Inqanaba 12V 20A Automatic Lithium LiFePO4 Battery Charger
• technology Switchmode: Ewe
• ukhuselo wokwephuka: Ewe
• Isiphumo ukhuseleko elifutshane: Ewe
• ukhuselo link ibhetri Non: Ewe
• Kule yokhuseleko ombane: Ewe
• Kule ukhuseleko lobushushu: Ewe
• ukhuselo Cima: Ewe
• Umdlalo fan: lobushushu Automatic elawulwayo.
• Igalelo ombane: 220-240V AC, 50 / 60Hz / 110V AC, 50 / 60Hz.
• amandla Input: 554W
• output Ikaliwe: 12V DC, 20A
• Emva mijelo: 4mA
• Ubuncinane isiqalo ombane: 1.0V
• Amanqanaba 8: Qala Soft, Bulk, Absorption, Hlalutya, Ugqibo, ukukhuliswa, Ahambayo nokulondoloza.
• Uluhlu Battery: 40-200Ah
• Iintlobo iibhetri: iibhetri 12V Lithium-ion LiFePO4
• Thermal ukukhusela (fan on): 65 ℃ +/- 5 ℃.
• Imigangatho Compliant: CB, CE, IEC60335, EN61000, EN55014
• Ubunzima: 1.28kg
Imveliso Protection Short
Phezu Protection Ubushushu
Oku ngokupheleleyo oluzenzekelayo itshaja lithium ibhetri kunye nezigaba ophethe 8.
abize Oluzenzekelayo ikhusela ibhetri yakho mali ingaphezulu. Ngoko ushiye itshaja eqhagamshelwe ibhetri ngokungenammiselo.
-Sigaba 8 womserbia yinkqubo womserbia ebanzi kakhulu kwaye oluchanileyo onika ibhetri yakho ubomi elide kunye nokusebenza okungcono kuthelekiswa usebenzisa iitshaja bemveli.
Kwezi tshaja-Isigaba 8 yenzelwe neebhetri lwe Lithium-ion usebenzisa iteknoloji LiFePO4 kuphela.
INyathelo1. Qala soft
A iinkqubo intlawulo yokuqala ukuba kuhle esazisa amandla ebhetri. Oku likhusela ibhetri kwaye kwandisa ubomi bebhetri.
Inyathelo 2. Bulk
Ukutshaja nge lwangoku Ubuninzi de amandla malunga-90% ibhetri.
mode Bulk kumjikelo Ukuvuya womserbia. Inqanaba lokuqala kuqhubeka de ombane ibhetri i-terminal Uvukile ngaphezu umda amisiweyo, apho yalatha itshintshela kwitshaja ukuya bulk Ukuvuya womserbia.
Ukuba ombane terminal alukhange wegqitha umda ombane kwezintsuku xesha libekiweyo, le itshintshela itshaja ulungiso imo (Inyathelo 2 isibane eqinileyo) kwaye discontinues ukutshaja. Ukuba kunjalo, ibhetri eziphosakeleyo okanye umthamo yayo inkulu kakhulu.
Inyathelo 3 Absorption
Ukutshaja isehla yangoku nkulu ukuya umthamo ibhetri 95%.
Inyathelo 4 Hlalutya.
Ukuvavanya ukuba Ibhetri ukubamba isigxina. Iibhetri ezingenako ukubamba mrhumo kufuneka kutshintshwa.
Step 5 Ukugqitywa
intlawulo Final kunye nokwanda lwangoku.
Inyathelo 6 nokukhulisa
Charge lokugqibela nge ubuninzi ombane ukuya umthamo ibhetri 100%.
Inyathelo 7 Float
Nombhojana isigaba ugcina ibhetri kwi-100% isigxina ibhetri ngaphandle ukutshaja ixesha elide okanye kokonakalisa ibhetri. Oku kuthetha kwitshaja kungashiywa eqhagamshelwe ibhetri ngokungenammiselo.
Inyathelo 8 ukulondoloza
Ukugcina ibhetri kwi 95% -100% umthamo. Kwitshaja iqwalasela ombane ibhetri kwaye anike nokugcina xa kuyimfuneko ukugcina ibhetri igcwaliswe ngokupheleleyo.
I-12 EZIZENZEKELAYO Lithium Battery itshaja inenani 8- inyathelo umjikelo womserbia oluzenzekelayo ngokupheleleyo. Itshaja ngokuzenzekelayo iya umva ukuya ekuqaleni curve Ukuvuya womserbia.
Enoba ubungakanani okanye uhlobo, shiya ku LBC-Charge. Amandla yabasebenzi.
Omnye unyaka iwaranti.
Akhona eXcellent Pre-ukuthengiswa kunye nenkqubo inkonzo Emva-ukuthengiswa.
l Umi ngowe-1986, omnye umenzi professional ngokukodwa izixhobo zombane.
nyaka-30 Factory zobungcali l umenzi Zhongshan, China
Uluhlu Product l: Power Invertor, Automantic Voltage Regulator, Battery Charger, Converter kunye Solar Tshintsha Controller.
Certificate l: ISO 9001-2015, certification GS, iziqinisekiso CB, njl
Previous: 8 Inqanaba 12V 20A Automatic Lithium LiFePO4 Battery Charger
Oluzenzekelayo Battery Charger For Car
Battery Charger Nge Led
Electric Bike Battery setshaja 12.6v
Trip Boat Battery Charger
Kuba Paslode Battery Charger
Lead Acid Battery setshaja 12v
Qc3.0 Car Battery setshaja Cable
Egcwalisekayo Battery Chargers
Idilesi: Tongle Industrial Park, No.38 Donghai West Road, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, China